Site Map (Blog မြေပုံ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Site Map (Blog မြေပုံ)
ဒီဘလော့ကို လာလညျသူတှအေနနေဲ့ အခကျအခဲမဖွဈ၊ အခြိနျမကုနျရလအေောငျ ဒီဘလော့နဲ့ ပတျသကျပွီး အလှယျဆုံးဖွဈအောငျ ဒီမွပေုံကို ရေးသားရခွငျးဖွဈပါတယျ..
ဘာမှ မသိသေးသူတှအေနနေဲ့ ဒီဘလော့မှာ ကိုယျ လိုခငျြတာကိုရှာဖို့အရငျ သိထားရပါမယျ..
ပထမဆုံး အပျေါတနျးမှာ ခေါငျးစဉျတှရှေိတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဆီမှာ Ebook, နညျးလမျးမြား၊ Softwares စသညျဖွငျ့ အုပျစုလိုကျတှပေါ။ ခေါငျးစဉျတဈခုကို ထောကျလိုကျရငျ Drop Down နဲ့ ပွထားတယျ.. အဲဒါကိုနှိပျပွီးရှာနိုငျပါတယျ။
အသေးစိပျတဈခုခငျြးကိုတော့ Categories, Blog Label, Label, ခေါငျးစဉျမြား စသညျဖွငျ့ နာမညျတပျပွီး အုပျစုလိုကျလေးတှခှေဲထားလရှေိ့ပါတယျ.. အဲဒါတှဟော ကိုယျရှာဖို့ လှယျအောငျလုပျထားတာပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ မိတျဆှကေ Root နဲ့ပတျသကျတဲ့ Software လေးတှလေိုခငျြဆိုပါစို့.. Label အောကျမှာ Root Tools ဆိုတာကိုနှိပျလိုကျရငျ Root Tools နဲ့ပတျသကျတဲ့ Software တှခေညျြးပဲ တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဘလော့မှာတော့ ညာဘကျမှာ ထညျ့ထားပါတယျ...
နောကျတဈခုက Search Box မှာ ကိုလိုခငျြတာကို ရိုကျထညျ့နိုငျပါတယျ.. အဲဒီအကှကျလေးကတော့ Search, Search Here စသညျဖွငျ့ စာသားလေးကိုတှနေို့ငျပွီး ဘေးမှာ မှနျဘီလူးပုံလေးနဲ့ဖွဈပါတယျ... ဆိုဒျတဈခုရဲ့ ညာဘကျအပျေါနားလေးမှာ ရှိနတေတျပါတယျ။
ကိုယျလိုခငျြတာ တှပွေီ့ လိုခငျြတယျ။ ဒါဆိုရငျ Download လုပျရတော့မယျ.. ဘယျလိုလုပျရမှနျးမသိဘူးဆိုရငျ ကြှနျတျော နညျးလမျးမြား ခေါငျးစဉျအောကျက ဒေါငျးလော့လုပျနညျးမြား ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျသီးခွားရေးပေးထားပါတယျ။ အဲဒါကို နှိပျလိုကျပါ။ ဒေါငျးလော့လုပျနညျးအမြိုးမြိုးကိုမွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ မိတျဆှမြေား လိုခငျြတာကို ရှာဖှရေယူနိုငျမယျလို့ယုံကွညျပါတယျ။ ဒေါငျးလို့မရတာ၊ မယူတတျတာကိုတော့ ' ဒေါငျးမရပါ၊ မရပါ " လိုမပွောဘဲ ဘယျလိုဒေါငျးမရတာလဲ။ လငျ့သနေတောလား၊ လငျ့မှားနတောလား။ ဒေါငျးရငျးနဲ့ ရပျသှားတာလား။ စသညျဖွငျ့ ကှဲပွားစှာ ပွောဖို့ လိုအပျပါမယျ။ ဒါမှ ကြှနျတျော ဘာလုပျပေးရမယျဆိုတာ သိမှာပါ။
အဆငျမပွလေို့ အခကျအခဲရှိလို့ ဆကျသှယျခငျြရငျတော့
maungpauk@gmail.com ကို အီးမေးပို့နိုငျပါတယျ။ ( Gtalk မပွောပါ )
ဒါမှမဟုတျ သကျဆိုငျရာ ပို့ဈတှရေဲ့ အောကျမှာ Comment ပေးနိုငျပါတယျ။ ပွနျလညျဆကျသှယျစခေငျြရငျ မိမိတို့ရဲ့ ဆကျသှယျရမယျ့ Email ကိုပါ ရေးထားခဲ့ကွပါလို့ ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျအပျပါတယျ။
PH0ENYAN February 15, 2014 at 9:18 PM
zayar February 23, 2014 at 7:43 AM
thetwainaung February 28, 2014 at 2:47 AM
Unknown March 3, 2014 at 12:29 PM
download ဆွဲမရဘူးဖြစ်နေတယ် all update reader ကိုဆွဲချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
Unknown April 20, 2014 at 4:06 PM
အကို pc window7 wifi hotspot ဘယ်လိုလုပ်လဲသိချင်လိုပါ။ တင်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကို pcေ၇ာ latopေ၇ာwifi hotspot ပြန်လွင်နည်လေးတင်ပေးပါနော်။ window7ပါအကို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
su lay May 3, 2014 at 8:54 PM
အကိုရေ huawei y220 - t10 ရဲ့ cwm recovery လေးတင်ပေး
့huawei G6-coounlock bootloader code ဘယ်လိုတောင်းရမလဲကူညီပါ တရုတ်စာနားမလည်ဘူး
သန့်ဇင်ဦး May 12, 2014 at 8:20 PM
rdrobox က လင့်သေနေလားမသိဘူးအကိုerrorပြနေတယ်
သန့်ဇင်ဦး May 12, 2014 at 8:21 PM
အင်္ဂလိပ်​စာ​ရေးနည်း vol-1 တင်​​ပေးပါအုံး။
Unknown May 28, 2014 at 6:47 PM
က္ဈန်တော့နာမည်ဇော်ဦးပါ က္ဈန်တော်ကနည်းပညာဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ပါ ဖုန်တွေကိုရုဖောက်ထားတာနဲ့မဖောက်ထားတာ ဘယ်လိုခွဲရမလည်းသိရင်ပြေပေးပါ
Unknown June 2, 2014 at 12:09 AM
Phone မှာ တရုတ်စာတွေ ဂျပန်စာတွေ မြင်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြေပြပေးပါဦး
Unknown June 2, 2014 at 12:11 AM
phone screen မှာ ကိုယ်လုပ်သမျှ vidoe file နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ့် apk file ရှိရင်တင်ပေးပါဗျာ
Huawei Y210C(Y210-2010,Android 2.3,V100R001C92B828) Official Firmware​ ​လေးရှိရင်​ကူညီ​ပါဦးအကို
Anonymous June 26, 2014 at 7:21 AM
Huawei Y210C(Y210-2010,Android 2.3,V100R001C92B824) Official Firmware​ ​လေးရှိရင်​ကူညီ​ပေးပါခင်​ဗျာ
Zaw Rayin June 29, 2014 at 8:56 PM
Label ကို ဘယ်လိုတပ်ရမလဲ
Page name - Football body လောင်းကစား
Page link -https://www.facebook.com/pages/Football-body-%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/610965128977522
အားကစားကဏ္ဍ တွင်ထည့်ပေးစေလိုပါသည်. ကူညီနိုင်မလား ပြန်ပြောပေးပါ အကို
download link ကို dropbox နဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေမယ်ဗျ
မောင်နေခြည် July 16, 2014 at 2:19 PM
I am no knowledge of IT.
Anonymous July 29, 2014 at 10:21 PM
အကို ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာစာတန်းထိုး တရုတ်ကားလေးတွေ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
ဝါဆို August 30, 2014 at 7:16 PM
မောင် September 9, 2014 at 7:14 AM
Anonymous September 13, 2014 at 1:39 AM
Nay Bala September 18, 2014 at 6:47 PM
Firmware တင်နည်း download မရပါ
Anonymous September 19, 2014 at 2:02 PM
အကိုရေ မြန်မာနိုင် ငံရဲ့ တရားဝင် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေအ ကြောင်း သိချင် ပါတယ်
Unknown September 27, 2014 at 11:59 AM
​ရေခဲ​သေတ္တာ ၊ အဲကွန်းပြုပြင်​နည်းအ​ခြေခံစာအုပ်​ရှိရင်​တင်​​ပေးပါ။
အမြဲတယ်​တမ်​: all update reader ကြည့်​ပြီးအသုံးပြု​နေလို့ပါ
​လေးစားမှုဖြင့်​ ကို​ပေါက်​ ကို​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
ကန့်ဘလူကဆိုင်တွေကကတ်ပေါက်အဟောင်းမရှိလို့ပြင်လို့မရဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမန္တလေးHuawei service centerကိုဖုန်းဆက်တော့မန္တလေးကိုလူကိုယ်တိုင်လာပြင်ရမယ်တဲ့ ကားနဲ့ပို့လို့မရဘူးတဲ့ ဒါကြောင့်မို့
အကို့ဆီမှာကတ်ပေါက်အဟောင်းလေးရှိရင် ပေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကားနဲ့ကန့်ဘလူကိုပို့ပေးလို့ရမလား။
အကူအညီတောင်းတာပါ။ကျွမ်တော်တို့မြို့ကရန်ကုန်ရော မန္တလေးရော ရွှေဘိုနဲ့ရောနဲနဲအလှမ်းဝေးလို့ပါ။ကိုပေါက်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တေည်မသိလို့
အကို့ဆိုဒ်ကို အိုင်အိုအက်စ်ကနေကြည့်ဖို့ ဆော့ဝဲရှိရင် မျှစေချင်ပါတယ်ချင်ဗျာ.. ပို့စ် တိုင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ
G6 U00 firmware တင်တာ eorrပြနေတယ်အကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပါအုံး
Anonymous March 23, 2015 at 9:59 PM
acer pc မှာ ဖုန်းနဲ့ wifi conet မရလို့ ဘာလုပ်ရမလဲဗျာ